Khuburo shaaca ka qaaday goobaha Somalia ee uu ku jiro shidaalka ugu badan - Caasimada Online
Home Warar Khuburo shaaca ka qaaday goobaha Somalia ee uu ku jiro shidaalka ugu...
Khuburo shaaca ka qaaday goobaha Somalia ee uu ku jiro shidaalka ugu badan
Nairobi (Caasimada Online) – Khubaro Daraasaysa cilmiga Jiyoolajiga gaar ahaan khayraadka shidaalka ayaa waxa ay sheegeen in Soomaaliya uu ku jiro shidaal badan oo noocyadiisa kala duwan ahi sida Batroolka iyo Gaasta dabiiciga ahba, iyaga oo sheegay in shirkado badani wakhtigan xiisaynayaan in ay shidaal ka soo saaraan Soomaaliya.
Khubaradani waxa ya sheegeen in calaamado badan oo la helay ay muujinayaan in shidaal badani ku jiro Soomaaliya marka lagu horreeyo badda Soomaaliya ee Indian Ocean. Astaamahaasi oo ay ka mid yihiin badda salkeeda oo uu ka soo siimoobo (seepage), uuna ka soo burqado isagoo dareere ah ama hawo ah ah.
Waxay sidoo kale sheegeen in oogada dhulka laga dheehan karo goobo badan oo gaas dabiici ahi ku jiro sida Gobolada Togdheer iyo Oodweyne oo hadda hoos-taga Somaliland. Halka dhinaca xeebta Gobollada Saaxil, Maroodi-jeex Awdal iyo Salal-ba ay ka jiraan shidaal noocyo kala duwan ahi.
Shirkadaha Soomaaliya heshiisyada la galay ama raba inay la galaan way badan yihiin. Shell-ExxonMobil ayaa ugu horraysay oo iyadu waxay la galeen Soomaaliya heshiis waagii Dowladdii Maxamed Siyaad Barre, November 1988 kaasi oo laga baadhay dhinaca gobolo hadda ka mid ah Somaliland.